ကိုယ့်ကို ပျော်အောင်မထားနိုင်ရင် အပျိုကြီးပဲ လုပ်တော့မယ်ဆိုတဲ့ အဆိုတော် ပိုပိုရဲ့ အတွင်း?? - Yangon Media Group
ကိုယ့်ကို ပျော်အောင်မထားနိုင်ရင် အပျိုကြီးပဲ လုပ်တော့မယ်ဆိုတဲ့ အဆိုတော် ပိုပိုရဲ့ အတွင်း??
အဆိုတော်ပိုပိုရဲ့ ဘဝဖြတ်သန်းမှုပုံစံ၊ တစ်ယောက်တည်း ရပ်တည်ရတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ အခက်အခဲတွေကို ပရိသတ်တွေကို သိစေချင်တဲ့ဆန္ဒနဲ့ မေးမြန်းဖြစ်သမျှလေးကို ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ သူ ဘာတွေဖြေထားလဲဆိုတာကိုတော့ ဖတ်ကြည့်လိုက်ရအောင်နော် . . .
တစ်ယောက်တည်း ရပ်တည်ရတဲ့သူတစ် ယောက်ရဲ့ ခက်ခဲမှုတွေက ဘာဖြစ်မလဲ။
ပို့ကို တစ်ယောက်တည်းဖြစ်အောင် မွေးခဲ့တာဆိုတာ တစ်ယောက်တည်းဖြစ်အောင် လုပ်ရမှာပေါ့။ ပို့ခံစားချက်တွေကို သူများတွေ နားလည်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ နားလည်နိုင် တဲ့သူတွေရှိရင်တော့ ကောင်းမှာပေါ့။ ဒီလိုပါ ပဲ။ ပင်ပန်းတယ်။ တစ်ယောက်တည်း ရပ်တည် ရတဲ့သူတွေကတော့ ပိုပြောတဲ့ဟာတွေ နားလည်နိုင်မှာပေါ့။ မိဘရှိတဲ့သူတွေ၊ အဆင်ပြေ တဲ့သူတွေကတော့ ဘယ်နားလည်နိုင်ပါ့မလဲ။
မိန်းကလေးတစ်ယောက်က ဆင်းရဲတဲ့ဒဏ်ကို မခံနိုင်တဲ့အဆုံးမှာ လမ်းကြောင်းမှားသွားခဲ့ကြတာမျိုးရှိတဲ့အပေါ် ဘာပြောချင်လဲ။
ဘယ်လိုပြောရမလဲ….ပို့ကျတော့ ပကာသနတွေ သိပ်မက်တဲ့အထဲမှာမပါဘူး။ ပြီးတော့ ပစ္စည်းတွေလိုချင်တဲ့အထဲမှာလည်း မပါဘူး။ ငယ်ငယ်ကတည်းက ဖုန်းကောင်း ကောင်းကိုင်ချင်လိုက်တဲ့စိတ်တွေ မရှိခဲ့ဘူး။ အရေးကြီးတာက ဖုန်းပြောလို့ရရင် ပြီးပြီလေ။ အခုနောက်ပိုင်း ဖုန်းကိုင်တယ်ဆိုတာကလည်း ကိုယ်ရှာနိုင်လို့ ကိုယ်ကိုင်တာ။ iphone တို့၊ Samsung တို့ ရူးနေတာမျိုးလည်း မရှိဘူး။ အဓိကက ဖုန်းပြောလို့ရမယ်၊ ဓာတ်ပုံရိုက်လို့ရမယ်ဆို တော်ပြီ။ ဒီလောက်ပဲ။ ကိုယ့်မှာ မရှိရင်လည်း မရှိဘူး။ ခပ်တည်တည်ပဲနေ တယ်။ ပိုက်ဆံမရှိပေမယ့် လမ်းမှားလိုက်တဲ့ မိန်းကလေးတွေကိုလည်း ပိုပို သဘောမကျဘူး။ ပိုက်ဆံကလည်း မရှိဘူး။ ဖုန်းကောင်း ကောင်းလည်း ကိုင်ချင်တယ်။ အင်္ကျီကောင်း ကောင်းလည်း ဝတ်ချင်တာမျိုးလည်း မကြိုက် ဘူး။ ကိုယ့်ရှိမှ အရှိပဲ။ အင်္ကျီအစုတ်ကလေး နှစ်ထည်လောက်ရှိလည်း ဒါက ကိုယ်သန့်ရှင်း တဲ့ပိုက်ဆံနဲ့ ဝယ်ထားတာဆိုတော့ အဲဒါကို ဂုဏ်ယူရမှာ ..မိန်းကလေးတွေလည်း မဟုတ် ပါဘူး။ တချို့ယောက်ျားလေးတွေလည်း မြင် ဖူးတယ်။ ဟိုဟာမှ ဒီဟာမှ ဟို Brand မှ ဒီ Brand မှဆိုပြီး ယောက်ျား လေးတွေလည်း ရှိတာပဲ။ ပိုပိုတော့ ကိုယ့်ရှိမှအရှိပဲ။ ပကာသနတွေကို မမက်ဘူး။ ပကာသနတွေ မက်တဲ့သူတွေကိုလည်း သိပ်မကြိုက်ဘူး။
ကိုယ်တိုင်က လမ်းမှားမရောက်အောင် နေ ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်…။
အတတ်နိုင်ဆုံးကတော့ နေဖြစ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ လူတိုင်းမှာတော့ အမှားတော့ရှိတယ်။ မမှားတဲ့သူတော့ မရှိဘူး။ အတတ်နိုင်ဆုံးတော့ ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ် ကိုယ်ရပ်တည်နိုင်တဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်ဖြစ်အောင်တော့ လုပ်ပါ တယ်။ ဒါပေမဲ့ ရယ်တော့ရယ်စရာတစ်ခုက တစ်ခါတလေကျရင် ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ် ကိုယ်ရပ်တည်နိုင်အောင် နေတော့နေတယ်။ ဒါပေမဲ့ တချို့ယောက်ျားတွေကျတော့ အရမ်း တော်တဲ့မိန်းမတွေကို မကြိုက်ဘူးထင်တယ်။ ဆောရီးနော်..ပြောတာ မှားရင်။ အရမ်း တော်နေတော့လေ… (ရယ်လျက်)သူတို့ဘာ ဖြစ်လဲ မသိပါဘူး။ အဲလိုတော့ရှိတယ်။
အခုတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဟိုးအရင်တုန်းက ကြုံဖူးတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လည်း အရမ်းတော်နေတယ်လို့ မပြောပါဘူး။ ကိုယ်လည်း အမှားတွေလည်းရှိတယ်။ တစ်ခုက မိန်းကလေးတွေ ထက်မြက်ပြီဆိုရင် ယောက်ျား လေးတွေက တစ်မျိုးပဲ။ တခြားယောက်ျားလေး တွေကို ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ်နဲ့တွဲ တဲ့ယောက်ျားလေးတွေက ကိုယ်အရမ်း တော်ပြီဆိုရင် သိပ်ပြီးသဘောမကျ ကြတာလား မသိဘူး။ အဆင် တော့ မပြေတာတော့ သိတယ်။ မပြောပြတတ်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ အဆင်မပြေ တာတော့ သိတယ်။
ဟိုးအရင်တုန်းက မိသားစုနဲ့လည်း နေချင်ပါတယ်။ အခုလည်း နေချင်တဲ့ စိတ်ရှိတာပဲ။ ဒါပေမဲ့ အပျိုကြီးဖြစ်တော့လည်း ဘာဖြစ်လဲ။ အပျိုကြီးဖြစ်တော့ ကိုယ့်ကိုချစ်နေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးက ကိုယ့်ကိုဝိုင်းပြီးချစ်နေကြ တော့ ပျော်စရာကြီး။ တစ်ခါတလေ ကျရင်တော့ အထီးကျန်တာပေါ့။ ဒါပေမဲ့လည်း အရမ်းလွတ်လပ်တယ်။ ကိုယ်လုပ်စရာရှိတာ လုပ် မယ်။ ကိုယ်ပေါင်းချင်တဲ့သူနဲ့ ပေါင်းမယ်။ ကိုယ်တွေ့ချင်တဲ့သူနဲ့ တွေ့မယ်။ ရည်းစားမရှိဘူးဆိုရင် ရည်းစားအဟောင်းနဲ့လည်း သူငယ်ချင်းပြန်ဖြစ်နိုင်တာပဲလေ..။ ဆိုတော့ အကုန်လုံးနဲ့ သူငယ်ချင်း ပြန်ဖြစ်နိုင်တယ်။ ရည်းစားမရှိခြင်းဟာ ပျော်စရာကောင်းတယ်။ နောက်ပိုင်းကျတော့ အပူတွေသိပ်မလိုချင် တော့ဘူး။ ကိုယ့်အပေါ် မေတ္တာစစ် မေတ္တာမှန်နဲ့ မချစ်ရင် ဘာအပူမှကို မလိုချင်တော့တာ။ ပျော်အောင် မထားနိုင်ရင် လစ်။ ကိုယ့်ကို ပျော်အောင်မထား မှတော့ ဘာလုပ်မှာလဲ။ အချစ်ဆိုတာ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ပျော်ရွှင်မှ အချစ်ဖြစ်တာ လေ။ ကိုယ့်ကို ပျော်အောင်မထား နိုင်တဲ့သူဆိုရင် အပျိုကြီးပဲလုပ်မယ်။ ပြီးတော့(ရယ်လျက်) ကိုယ့်ကြောင့် မြန်မာ ပြည်က ယောက်ျား ထုကြီး အသည်း
သရုပ်ဆောင် ရတနာဗို ချစ်သူရှိသော်လည်း အိမ်ထောင်ရေးကို မစဉ်းစားသေး ဟုဆို
“The Post” ရုပ်ရှင် ဝင်ငွေကောင်းနေ
အဝလွန်သူတို့၏ ရင်သားကင်ဆာ အဖုအကျိတ် ကြီးထွားလာမှ သိရှိနိုင်ဟု ဆို
နည်းပြသစ်နေရာအတွက် အလာဒိုက်ကို ခန့်အပ်ရန် ဝက်စ်ဘရွန်းအသင်း ပြင်ဆင်နေ
မုံရွာ-ဖောင်းပြင်-ဟုမ္မလင်း-ခန္တီးကားလမ်းကို ရာသီမရွေးသွားလာနိုင်သည့်ကားလမ်းအဖြစ် ဆောင်ရွက?